Mpikatroka Breziliana Miady Amin’ny Fanaraha-maso Faobe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2014 14:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, বাংলা, Português, English
Satria mivondrona izao tontolo izao mba hanohitra ny fanarahamaso faobe amin'ny 11 febroary 2014, olom-pirenena, fikambanana sy vondrona Breziliana no miara-mientana amin'ny hetsika #TheDayWeFightBack.
Ny vondrona manohitra ny fanarahamaso Antivigilancia.tk (@antivigilancia ao amin'ny Twitter), iray amin'ireo Breziliana 15 nanasonia ireo fotokevi-dehibe iraisampirenena momba ny Fampiharana ny Zon'olombelona eo amin'ny Fanarahamaso ny Fifandraisana, dia manana tranonkala ahitana vaovao feno amin'ny teny Portiogey mikasika ny fomba fandraisana anjara amin'ny #TheDayWeFightBack, sy ireo fitaovana marobe amin'ny andron'ny hetsika, tahaka ny sora-baventy sy ny meme (fampihomehezana).
Sariitatra avy amin'i Latuff with D'Incao (2013). Nozarain'ny WebWe Want tao amin'ny Flickr (BY SA 2.0)
Namaly ny fanamby nampahafantarin'ny Web We Want (Ny web tadiavintsika) ilay mpanao sariitatatra Breziliana malaza Carlos Latuff tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary mba hamorona sangan'asa vaovao noforonina hita maso mikasika ny fanarahamaso nomerika sy ny zo hanana fiainana manokana.
Sariitatra avy amin'i Latuff miaraka amin'ny Operamundi (2013). Nozarain'ny WebWe Want tao amin'ny Flickr (BY SA 2.0)
Tao amin'ny Twitter, Breziliana maro no nampifandray ny andron'ny hetsika amin'ny volavolan-dalàna mpisava lalana mikasika ny zon'ireo mpiserasera amin'ny aterineto, ny lalàna “Marco Civil da Internet” (Lalàna mifehy ny Aterineto), izay hodinihana mandritra ny fivoriana itambarana azon'ny rehetra atrehina [pt] androany ao amin'ny Antenimieram-pirenena. Vondrom-pikambanana fiarahamonim-pirenena no fantatra fa hihaona amin'ny Minisitry ny Fitsarana [pt] mba hilaza ireo “ahiahy goavana”” manoloana ireo fanovana farany ao amin'ny volavolan-dalàna, indrindra ny mikasika ny fanajana ny “zon'ny tsy fahazoana idikidirana sy ny fahazoa-manafina fitosahana sy ny votoatim-pifandraisan'olo-tsotra, ny zo hanana fiainana manokana ary ny fahalalahana miteny“.
Sariitatra avy amin'i Latuff miaraka amin'i Operamundi (2013). Nozarain'ny WebWe Want tao amin'ny Flickr (BY SA 2.0)
Azo jerena ao amin'ny Flickr Web We Want ny sary nampidirina rehetra hifaninana.